China API610 ANSI Process Chemical Standard Petrochemical Heavy Crude Fuel Oil Transfer Pump factory sy mpanamboatra | Tongke
API610 ANSI Process Chemical Standard Petrochemical Heavy Crude Fuel Pump Pump
ZA paompy fanodinana andian-dahatsoratra ZA dia marindrano, sehatra singe, endrika famolavolana miverina, mihaona amin'ny kinova ANSI / API610-2004 faha-10 izy ireo.
Ho an'ny famindrana madio sy kely voaloto, maripana ambany sy avo, ranon-javatra tsy miandany sy simika.
Ny andian-tsarimihetsika ZAO dia miaraka amina casing split radial, ary ny OH1 karazana pump6 API610, ZAE ary ZAF dia karazana OH2 paompy API610. Ny diplaoma avo lenta sy ny mari-pahaizana Hydraulika dia mitovy amin'ny andian-dahatsoratra ZA an ZAE; Impeller dia karazana misokatra na semi-open, mifanentana amin'ny lovia tsy mahazaka akanjo anoloana sy aoriana.
Azo ampitaina amin'ny famindrana ranon-javatra isan-karazany amin'ny alikaola, sako-tsofina, ranoka viscous sns.
Kitapo misy tanany hazo, mitokana tanteraka amin'ny ranoka, sorohy ny harafesin'ny hazo, manatsara ny androm-paompy napetraka. Ny motera dia miaraka amina fametahana diaphragm lava, fikojakojana mora sy marani-tsaina, nefa tsy misaraka fantsona sy motera.
Ampiasao indrindra amin'ny:
Fanadiovan-tsolika, indostrian'ny petrol-simika, fanodinana arintany ary injenieran'ny mari-pana ambany
Indostrian'ny simika, fanaovana taratasy, pulp, siramamy ary toy ny indostrian'ny fanodinana mahazatra
Fanarian-drano any an-dranomasina
Rafitra fanampiana ny toby famokarana herinaratra
Teknika fiarovana ny tontolo iainana
Sambo sy injeniera any ivelany
Previous: Paompy centrifugal rano madio multistage MS Pressure avo lenta
Manaraka: Diesel Engine Long Shaft Vertical Turbine Fire Pump
Ity karazana ity dia API610 OH1, paompy karazana OH2 araky ny tsindry.
savaivony DN 32-400mm
fahafahana hatramin'ny 2600 m3 / h
lohany hatramin'ny 300m
Suhu amin'ny ranoka -80 ~ 170 ºC
Fanerena miasa ~ 2.5 MPa (Ny antsipiriany dia hanondro ny sary an'ny PT, arakaraka ny mari-pana isan-karazany hisafidianana fitaovana mety)
Ho an'ny famindrana madio sy kely voaloto, maripana ambany sy avo, ranon-javatra tsy miandany sy simika. Fanadiovan-tsolika, indostrialy petro-simika, fanodinana arintany ary injenieran'ny mari-pana ambany.
Indostrian'ny simika, fanaovana taratasy, pulp, siramamy ary toy ny indostrian'ny fanodinana mahazatra;
Fambolena rano sy famoahana rano an-dranomasina;
Rafitra famatsiana hafanana sy fifehezana rivotra;
Rafitra fanampiana ny tobin-jiro;
Injeniera miaro ny tontolo iainana;
Sambo sy injeniera any ivelany.